Esi sisithuba sam sokugqibela-iGeofumadas
Emva phantse kweminyaka emithathu yobukho beBhlog yeGofumadas, ukungena kwe-813 kunye nezimvo ezingama-2,504, emva kwenyanga enzima yeemeko zoxinzelelo, kubonakala ngathi yonke into iyaphela. Obu bomi bunje, zonke iinkanuko zihlala zihlala li thutyana, kwaye oku, kubonakala ngathi yaphela.
Phakathi kwezihloko eziye zandixakeka emva kokuhamba kwam ukuya Charlotte, Ndaye ndagqiba kwelokuba ndamkele ukumelwa kweBentley yeLatin America, endenza ndixakeke kakhulu ukugcina inqanaba lokupapashwa endikuqhelileyo kule bhlog, ndongeze kwigatya lesivumelwano elindinyanzela iminyaka emithandathu ukuba ndingabhali kwi ibhlog yakho. UKeith Bentley ube nobubele kakhulu ngokundivumela iinyanga ezintathu endizicelileyo zokufezekisa iintsuku ezingama-40 zexesha lesabatha endinethemba lokuzenza eTibet ukusukela nge-5 kaJanuwari, kukhenketho lweNtaba iKailas kunye nalapho ndinethemba lokuthumela khona iifoto; emva ndizakuthatha inxaxheba kwi iintsuku zeGIS.
Okwangoku, enkosi ngexesha lakho kunye nobuhlobo. KuTomás ngokuvula le ndawo eCartesianos, umhlobo olungileyo wobomi bonke; ukuya Gabriel Ortiz, ngenxa yengcebiso yakhe enempilo, kubahlobo bakhe Geomatic Blog ngenxa yeemfuno zabo, u-Angie ukuze aguqulwe kakuhle Chocolate, kuNancy ngomzamo wakhe wokuguqulela iGeosmoke, kwabanye abaninzi ukuba andiyikhankanyi ngenxa yokuba ndingasinda.
Ndifikelele kwisivumelwano neCartesia, ukuze oku kufumaneke kangangeentsuku ezingama-30, ngeli xesha banokuzikhuphela. Emva koku iyakususwa njengenxalenye yesivumelwano sam; omabini amaGeofumadas kunye neGalvarezhn baba sisizinda ekwabelwana ngaso kwiiNkqubo zeBentley, abathi ngokufumana iipesenti ezingama-79 zezabelo kwi-GIS ezininzi iba ngowona mceli mngeni kum.
Ngoko ke ndizimisele ukuqala ibhulogi engaziwa, apho ndiza kubhala khona ekugqibeleni. Apha ungandilandela, ngaphaya koko ndiyathemba ukukubona.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Hlanganisa imephu kunye neetafile ze-Excel
Post Next I-Geofumadas: Izibikezelo ze-2010: IntanethiOkulandelayo »
11 Iiphendula "Le yiposti yam yokugqibela"
Hayi! Kwaye andizange ndifunde le post! Ndandihlala eholide ngoDisemba kwaye ndaqhawula kunye namahlaya!
Kulungile malunga neentsuku ezingama-40 zesabatha zeTibet ... hahahahaha ... phantse, ndaphantsa ukuwa!
Ndandifumene le post ngenxa yokuba umntu ucofa ukusuka apha ukuya kwiblogi yam kwaye xa ndabona isihloko sesithuba ndiphantse ndifumane into!
Ngenhlanhla akuyinyaniso kwaye uyasinika, phakathi kwezinye izinto ezininzi, uvakalelo lwakho lwehlazo!
Siyabonga ngokundikhumbula kwaye ngokukodwa kuba ufumana amandla am.
Khangela kumzantsi we-Iberia.
Kwabo bahlala befunda phakathi kwemigca:
-Bentley ayithenganga i-Manifold
-Alfredo Castejón usengumphathi weBentley Mexico
🙂 Licala lobuhlobo lokuhlekisa kwifomathi ye-gml
Ezi zinto azenziwa .... !!!!!! ngaphandle kweblue ...
Ndafika ekugqibeleni kwaye ndonwabile kuwe kwaye ndacinga, hayi! into endiyifunayo andizange ndisindise !! Ndifuna ukufumana loo manqaku anomdla phambi kokuba ndivale iphepha!
Xa ndabona ikhonkco «apha ungandilandela» ndaqala ukuthandabuza ... indlela engaqhelekanga ngayo!
Ngapha koko, ndiye apho ikhonkco landithatha… eyakho intle kakhulu!
Ewe, isiqhulo sibalulekile ... ngokuqinisekileyo ukuxelele ukuba uphumelele iLotto?
... besele ndicingele !!!!!!!!! Ungandixeleli ngcono !!! (aba bantwana)!
Kungcono ukuba ungabaxeleli ukuhleka kwentombazana endiyenze ngokukhawuleza xa ndivuka.
Wow, kuhle kuwe, mhlobo wam !! Ngaba le nto yayingxoxo
Ngoko, iblogi yakho iya kuba yingxenye ye-Bentley Systems, kwaye ngaba uhamba ngokuya eTibet?
Ndivuyayo kakhulu ukuva ngempumelelo yakho !!
Yeyiphi i-bastard esile !!!! Ndiyakholelwa kuyo yonke into ...
... Ndimele ndinyaniseke kwaye ndiyidlile itayitile, ukuba ndiza kujoyina umbutho weGeofumadas (kufanele ukuba kubekho umongameli). Kodwa njengokuba bendifunda - ndiyathemba ukuba andiphazami-ndiyabona ukuba uyibhale phambi kwentsimbi ye-12: 00. Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kule nyanga nonyaka.
Ngoko ke! Uvuyo loMhla kuwe!
Ukuba kuyinyani ... ndiza kubiza ivoti ukutshisa iibhokisi ze-Bentley kwizikwere !!!!!
Ukukhupha kunye nokubingelela
Ndiyiginyile ... nangona ngale ntsasa ndithe «Lumka ngo-28/12 ukuba esinye isidenge singenza isiqhulo ......» =) .. Ha… .Kulungile, kwelinye icala ndiyavuya ukuba uyaqhubeka kwaye kwelinye kuyandenza buhlungu Bendiyiginyile ivesi yakho kwaye besele ndizonwabisa ngawe….
Nibingelela! kunye nokuqala okuhle kwe-2010!